Cross ala Guideway - China WY nkenke
miniature Ball Guideway
Cross ala Guideway
Aku adiana Ball kposara
Nkenke Ground Ballscrew
Cross ala guideway Anyị nwere ike chepụta, na-emepụta na-enye ọkọlọtọ na ahaziri cross ala guideway. Linear Ball guideway Linear Ball guideway emi esịnede abụọ nwere V-dị ka uzo ndu, ala onu, ala obi ụtọ na na, Ọ na-akpali atụ na azụ were were na nkenke-egweri V uzo elu, nwere ike ibu nnukwu ibu na-eduzi elu kpọmkwem, ezigbo linear ije. Ala ndu Cross ala guideway mee nke abụọ concave-convex orbit na 90 - ogo n'akuku onu, cylindrical r ...
Anyị nwere ike chepụta, na-emepụta na-enye ọkọlọtọ na ahaziri cross ala guideway.
Linear Ball guideway
Linear Ball guideway emi esịnede abụọ nwere V-dị ka uzo ndu, ala onu, ala obi ụtọ na na, Ọ na-akpali atụ na azụ were were na nkenke-egweri V uzo elu, nwere ike ibu nnukwu ibu na-eduzi elu kpọmkwem, ezigbo linear ije .
Cross ala guideway mee nke abụọ concave-convex orbit na 90 - ogo n'akuku onu, cylindrical ala. Ọ na-akpali atụ na azụ na-egweri convex orbit. n'ihi na oké cylindrical ala, nke na-edu na-aghọta elu kpọmkwem, ibu arọ, ezigbo linear ije.
1. Low esemokwu, Good kwụsie ike
2. Small mmalite esemokwu, elu were were
3. elu isi na elu ibu ike
4. mgbanwe Ọdịdị imewe na mfe echichi
Japanese ọkọlọtọ, Switzerland ọkọlọtọ, Non-mba ọkọlọtọ (ahaziri Eserese)
Previous: Ball Mkpụrụ
Next: miniature Ball Guideway
Ball Linear Guideway